2 KOH + 2MAYA2 → H2O + KNO2 + KNO3
potassium hydroxide nitrogen dioxide biyaha amooniyam haadi
(digo yara) (kh) (lng) (rnn) (rnn)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2KOH + 2MAYA2 → H2O + KNO2 + KNO3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee KOH (potassium hydroxide) oo la falgala NO2 (nitrogen dioxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo KNO2 () iyo KNO3 (potassium nitrate)?
KOH wuxuu la falgalayaa NO2
Dhacdada KOH ka dib (potassium hydroxide) waxay la falgashaa NO2 (nitrogen dioxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2KOH + 2MAYA2 → H2O + KNO2 + KNO3
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (nitrogen dioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
acid sulfuric KP biyaha amooniyam haadi sulfate potassium
(digo yara) (digo yara) (rnn) (lng) (rnn) (rnn) (rnn)
(xoog leh) (tiim) (trung) (xoog leh) (trung) (trung)
3 2 5 3 5 2 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3H2SO4 + 2KMnO4 + 5KNO2 H 3H2O + 5KNO3 + 2MnSO4 + K2SO4
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3H2SO4 + 2KMnO4 + 5KNO2 H 3H2O + 5KNO3 + 2MnSO4 + K2SO4
Oxygen amooniyam haadi
(digo dhach pha loãng nóng)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2KNO2 + O2 → 2KNO3
Waa maxay xaalada falcelinta ee KNO2 () ay kaga falceliso O2 (oxygen)?
Xaaladda Kale: waqti dheer
Dhacdada KNO2 ka dib waxay la falgashaa O2 (oxygen)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2KNO2 + O2 → 2KNO3
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KNO3 (oxygen)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KNO3 (potassium nitrate) badeecad ahaan?
amooniyam qalin potassium hydroxide hydroxide lacag ah amooniyam haadi
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta AgNO3 + KOH → AgOH + KNO3
Heerkulka: -50 ° C Hannaan: Ethanol
How reactions can happened and produce AgOH (silver hydroxide) and KNO3 (potassium nitrate) ?
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada AgNO3 + KOH → AgOH + KNO3
Su'aalaha la xidhiidha alaabta AgOH (silver hydroxide)
What are the chemical and physical characteristic of AgOH (potassium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh AgOH (silver hydroxide) badeecad ahaan?